Wednesday November 18, 2020 - 17:29:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo culus oo aan kala joogsi laheyn ayaa lagasoo calaamadeeyay inta badan furimaha dagaalka, melleteriga Abiy axmed ayaa iclaamiyay in ay qabsadeen magaaloyin muhiim ah oo horseed unoqon kara lawareegidda magaalada maqalla oo caasimad u ah ismaamulka Tigreega.
Wararka ka imaanaya Itoobiya waxay sheegayaan in shalay illaa iyo xalay dagaallo culus ay ka socdeen magaalada shire oo 120Km ujirta magaalada caasimadda ah ee Maqalla, magaaladan sida aadka ah loogu dagaallamayo waxay dhacdaa waqooyiga gobolka Tigray.
Wariyaal ayaa soo sheegay in ciidamada xabashida ay ku dagaal tageen todobaatameeyo gaadiidka gaashaaman ah iyo madaafiicda goobta halka maleeshiyaadka Tigreeda ay iyana isticmaalayaan hub culus.
Diyaarado dagaal oo loo malaynayo in ay leedahay dowladda imaaraatka carabta ayaa duqeymo culus ka geysanaya jiidda dagaalka iyagoo melleteriga itoobiya ufududaynaya in ay taqadum ka sameeyaan aagga Shire.
Maleeshiyada TPLF oo maalmo ka hor ka laga qabsaday magaalada Almaata ayaa dib usoo rogaal celiyay waxayna bilaabeen in illaa sedax jiho ay iska waabiyeen ciidamada melleteriga oo ay ku qasbeen in ay difaacyo ka sameystaan gudaha magaalada sidaas waxaa ku hakaday socodkii ciidamada ee dhanka Maqalla.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaal faraha looga gubtay uu ka dhacay Almaata oo qiyaastii 178Km ujirta magaalada maqalla, mas'uuliyiin itoobiyaan ah waxay usheegeen warbaahinta maxalliga ah in ay usii gurguuranayaan magaalooyinka waaweyn balse wali ma xaqiijin guul weyn oo ah in ay soo afjareen maamulkii TPLF ama ay qabsadeen magaalo ku fadhida macna weyn oo siyaasadeed ama melleteri.
Abiy axmed ayaa telefeshinka afka dowladda ku hadla ka sheegay in ay soo idlaadeen sedaxdii maalmood ee loo qabtay maamulka Tigreega in ay isku dhiibaan ciidamadiisa balse dhawaqaas ayaan loo hoggaansamin.
Madaxa xukuumadda Itoobiya wuxuu ku hanjabay in uu qaadi dagaal cir iyo dhul ah islamarkaana uu gummaadi doono maleeshiyaadka tigreega iyo madaxdooda haddii ay diidaan in ay isdhiibaan.
Dhinaca kale xaalado bani'aadanimo oo aad udaran ayaa lagasoo sheegayaa waqooyiga itoobiya, waxa loogu yeero Q.midoobe ayaa sheegtay in labaatameeyo kun oo ruux ay ka barakaceen gobolka tigray ayna xaaladdu ujihaysatay in ay meel xun gaarto.
Warbixinada ka yimid wakaaladda UN-ka ee gargaarka sheegta waxay caddeeyeen in maalin walba ay xuduudda suudaan ka gudbaan dad gaaraya 400 kun oo ruux Itoobiyaan ah.
Gobollada Kasala iyo Gadaariif ee wadanka suudaan waxaa gaaray inta ladiiwaan geliyay 27 kun oo ruux kuwaas oo wajahaya xaalad halis dhanka nolosha ah.